Fahombiazana amin'ny akademika, fitaintainana, antony manosika ary fifantohana: inona no tena zava-dehibe tokony hatao tsara any am-pianarana? - Fiofanana kognitive
Fahombiazana amin'ny akademika, fitaintainana, antony manosika ary fifantohana: inona no tena zava-dehibe tokony hatao tsara any am-pianarana?
Ianao izao: Home » Articles » fianarana » Fahombiazana amin'ny akademika, fitaintainana, antony manosika ary fifantohana: inona no tena zava-dehibe tokony hatao tsara any am-pianarana?
Ny fahaizana akademika dia afaka mandray anjara betsaka amin'ny mety hahitana asa, hanatsara ny toe-bolan'ny tena ary hiditra amin'ny ambaratonga ambony amin'ny fampianarana. Anisan'ireo fahaiza-mianatra, famakiana sy matematika izy ireo no misy fiatraikany amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainan'ny mpianatra. Fikarohana marobe no nanandrana namantatra ireo miovaova mifandraika amin'ny fahombiazana amin'ireo lafiny roa ireo.
Tao amin'ny fanadihadiana vao haingana, Geary sy ny mpiara-miasa aminy (2020)  dia nanadihady ny fifandraisana misy eo amin'ny fiovaovana samihafa sy ny fahaizana mamaky teny sy ny matematika amin'ny vondrona mpianatra 315 faharoa sy fahatelo. Ny mpandray anjara rehetra dia nanombana tamin'ny:
Fitsapana IQ (matrices sy voambolana Raven)
Fitsapana mifandraika amin'ny famakiana sy matematika (fandidiana isa sy fitsapana famakiana)
Fitsapana hafa momba ny kognita (isa an'arivony, lisitry ny teny hatao tsianjery, Fitsapana fitsapana)
Ankoatr'izay, ny antony manosika ny fianarana (tombatombana ny maha-zava-dehibe ny lohahevitra hodinihina), ny tebiteby manoloana ny matematika ary ny fihetsika mihaino dia nohadihadiana.
Ny faharanitan-tsaina (ampiarahina amin'ny fahatsiarovana miasa) dia vokatr'izany ny masontsivana lehibe amin'ny faminavina ny hafainganana sy ny marim-pototra amin'ny fahaizana mamaky teny sy matematika. Ny fiheverana ny saina kosa, toa manana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny matematika noho ny amin'ny famakiana. Ny tsy fisian'ny fifantohana, amin'ny fampiharana, dia mety hitarika amin'ny fianarana miadana ny matematika. Ny fiheverana iray hafa izay nahatongavan'ireo mpanoratra taorian'ny famakafakana ny angon-drakitra dia ny fahaizan'ny habaka dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fianarana matematika; Ankoatr'izay, ny fitsapana visuospatial (toy ny fitsapana Corsi) dia afaka manampy amin'ny fahafantarana ny fahasamihafana eo amin'ny fahombiazan'ny matematika eo amin'ny ankizy samihafa. Ny fahatsiarovan-tenan'ny fotoana fohy dia nanjary ilay mpilaza mialoha ihany mifandraika amin'ny famakiana (marina sy hafainganana), fa tsy amin'ny matematika.
Ny fahaiza-manavaka, ny saina any an-dakilasy ary ny fahalianan'ny lohahevitra amin'ilay lohahevitra dia toa mifandray akaiky. Amin'ny lafiny iray, ny tsy fisian'ny fifantohana dia mety noho ny tsy fahalianan'ny mpianatra manana olana ara-pianarana na ho ela na ho haingana amin'ilay lohahevitra; ankoatr'izay, ireo mpianatra manana fahaiza-manao avo lenta dia mampiasa fotoana betsaka amin'ny fianarana any an-tsekoly satria vitsy ny zava-tsarotra mahazo azy ireo. Amin'io fomba fijery io dia ilaina ny manao ny lohahevitra mahaliana sy mora azo kokoa mba hitazomana ny sain'ny mpianatra; Hita fa ny mpianatra manana fahasarotana amin'ny matematika sy ny famakiana dia manana risika bebe kokoa hiaina olana ara-panabeazana sy asa mandritra ny androm-piainany.
Betsaka ny miovaova izay afaka mifandraika amin'ny olana ara-pianarana (toy ny tontolo iainana misy olona, ​​sns.). Na eo aza izany fetrany izany, ity fanadihadiana ity dia manokatra sehatry ny fikarohana vaovao mba hahatakarana ny fahasahiranana ara-pianarana mihoatra ny porofo tsotra mifandraika amin'ny fianaran'ny sekoly.
Geary David C., Hoard Mary K., Nugent Lara, Ünal Zehra E., Scofield John E., Fianarana sarotra amin'ny famakiana sy matematika: ny anjara asan'ny faharanitan-tsaina sy ny fitondran-tena mifantoka amin'ny saina, ny sisintany amin'ny psikolojia, 11: 3138, 2020
attenzione, Famakiana, matematika, motivation, fahombiazana akademika
Fahombiazana amin'ny akademika, fitaintainana, antony manosika ary fifantohana: inona no tena zava-dehibe tokony hatao tsara any am-pianarana?2020-12-212020-12-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/boys-286245_1280.jpg200px200px
Ahiahy amin'ny fanadinana sy ny vokanyFianarana, lahatsoratra, fitondran-tena, fomba fandalinana